सरकारी विद्यालयमा केही गरेर सिट नपाएमात्र निजीविद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने प्रावधान ल्याउनुपर्छ - 761खबर.com
साउन १३, सिन्धुपाल्चोक - हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्यान्जेन शेर्पा स्थानीयतहका अब्बल जनप्रतिनिधिमध्येका एक हुन् । उनले गरेकाकाम अन्य स्थानीयतहकालागिपनि अनुकरणीय छन् । अध्यक्षबनेको तीनवर्षको दौरानमाउनले शुरु गरेको विकास प्रयास जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र प्रत्यक्ष्य लाभपाउने खालका छन् । योजनावद्ध विकास र जनताको चाहनालाई संगसंगै लगेका शेर्पासंग होमनाथ कट्टेल, रुकेस प्रधान र प्रकृति घिमिरेले गरेको कुराकानी :
तपाईको कार्यकाल तीनपूरा भएको छ । बजेट खर्चको प्रक्रियाबारे हेलम्बुबाट अरुले सिक्ने कुरा के छ ?
नेपालमा धेरै थरिका प्रणालीएवं वादका कुरा गर्दैआएका छौं । जुन वादको कुरा गरेपपनि अन्तिम उद्देश्यजनताले के पाएभन्ने हो । कुनवादले अथवा कुन प्रणालीले गाउँगाउँमा वा जनतासमक्ष के परिवर्तन ल्याउन सक्यो ?के गर्न सक्यो ? भन्ने नै हो । यो विषयअहिलेसम्म नेपालमालागू भएको छैन ।
हेलम्बुले सुरुदेखि नै यो कुरामा एकदमै ख्यालगर्दै आएको छ । शुरुमा गाउँपालिकामा आउने बित्तिकै एउटा ठूलो चुनौतीबनेको विनियोजित बजेट खर्च नहुने विषय थियो । बजेट खर्च भएनभन्ने बित्तिकै हाम्रो बुझाई अहिले खर्च नभएपनिपनि केन्द्रीयकोषमाजम्माहुने भएकालेअर्को वर्ष खर्च भइहाल्छ निभन्ने गलतधारणा छ । एक वर्षको बजेट खर्च गर्न २–३ वर्ष लाग्नेहो भने विकासमा हामीकहिल्यै कतै पुग्न सक्दैनौ । अरुदेशको तुलनामाहामीप्रत्येक वर्ष पछाडि परिरहन्छौँ । हामीले रातदिनकामगर्नु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो रहेको छ ।
हामी राजनीतिगर्नेहरु चुनावआउँदा घोषणा पत्रमाजनताको हित, समृद्धि आदिका कुरा गर्न कहिल्यै छाड्दैनौ । जब चुनाव सकिन्छ हामीले लेखेको कुरा पूर्ण भयो कि भएन सोच्दैनौँ । यस कारण हामीले त्यो बजेट खर्च गर्ने प्रावधान कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर निश्कर्षनिकालेका छौँ । यदि चैत मसान्तसम्मगाउँसभाले पास गरेको बजेट खर्च गरेन भने त्यो रकमगाउँपालिकाले निर्णय गरेर अन्यत्रखर्च गर्न सक्ने भनेर आर्थिक ऐनमा किटान गरेका छौँ ।
काम सुरु गर्न माघ–फागुनकुर्नु भएन । संघीय सरकारको नीतिमा कहीकतै माघ–फागुनमामात्र कामगर्नुपर्छ भनेको छैन । बजेट पास भएपछि खर्च गर्न पाइन्छ । कतै रोकिँदैन । कामगर्नु/नगर्नु सबै आफ्नो इच्छा शक्ति र प्रवृत्तिमा भर पर्ने कुराहो ।
यस अवधिमाजनताले महसुस गर्नेखालका के कस्ता कामगरिराख्नुभएको छ ?केहीउदाहरण दिनुहुन्छ की ।
म हामीले गरेका केहीकामको कुरा गर्छु । भौगोलिकहिसाबले हाम्रो गाउँपालिका निकै पछाडि छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमाचुनौतीथपेको विषयलाई ठूलो समस्याकारुपमालिएका छौं । महिला र सुत्केरीको स्वास्थ्यमा त्यतिकै ध्यानदिएका छौं । सुत्केरी महिलार दिदीबहिनीको स्वास्थ्यमाध्यान राखेर दुई ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण ग¥यौ । निःशुल्कएम्बुलेन्स सेवाउपलब्ध गराइरहेका छौं ।
हामीले अहिलेको कठिन परिस्थिति (लकडाउन) लाई मध्यनजर राख्दै आफूलाई रोग लाग्लाकिभन्ने चिन्ता गरेनौं । घरमा नबसिकन आफै औषधिलिएर गाउँगाउँपुग्यौँ । यो अवस्थामा चुपलागेर घर बस्यो भने जनताको आवाज कहीकतैबाट परिपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो । हामीले उनीहरुलाई घर–घरमागएर रोग अनुसारको निःशुल्कऔषधिवितरण गर्यौँ । चालू वर्षपनि औषधिलाई निरन्तरतादिने बाचा समेत गरेका छौँ । यसै गरी लकडाउनको पीडामा परेका किसानलाई हामीले बजारको भन्दा कम मुल्यमा रासायनिकमल उपलब्ध गरायौं ।
नेपालको सन्दर्भमामलाई राहतभन्ने शब्दशब्दकोषबाट निकालेर फाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । राहतदिएर केहीहुँदैन । राहतले कतिदिन धान्न सकिन्छ र ? त्यसकारण हामीले राहतमाग्न आउने सबैलाई गाउँपालिकाको विकासको काममालगायौँ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ ?
नेपालमा सरकारी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमगलत छ । सबैजनाले सरकारी विद्यालयमा दुःखपाउनेले वागरिबले मात्र पढ्छन् भन्ने सोच राखेका हुन्छन् । मेरो बिचारमा सरकारी विद्यालयमा केही गरेर सिट नपाएमात्र निजीविद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन सकेनौ भने अबको २–३ वर्षमा एउटा पनि सरकारी बिद्यालयबाँकी रहदैनन् ।
यसैगरी हामीले ८ भन्दा माथिल्लोकक्षाकालागि होस्टल सहितको एउटा २०–२२ कोठाको नमुनाविद्यालयनिर्माण गर्दैछौँ । त्यसमाहामीले तीविद्यार्थी आफै खानापकाउनेगरी नियमबनाएका छौँ । उनीहरुलाई कृषिफार्म प्रदानगर्नेछौँ जसबाट आफै तरकारी उत्पादनगर्नेछन् । यसो गरेमाउनीहरुले व्यवहारिक कुराहरु पनिसिक्नेछन् । विद्यार्थी र शिक्षकलाई गाउँपालिकाले खाजाखुवाउनेगरी बजेट छुट्याएका छौँ । शिक्षकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष शिक्षक स्वास्थ्यकोष खडा गरेर १० लाख रुपैया राखेका छौं । जसमा शिक्षकले महिनामा २०० रुपैंया“जम्मा गर्छन् । कार्यलय सहयोगीहरुलाई थपभत्ताको व्यवस्था गरेर काममा प्रोत्साहितगर्ने योजना अघि सारेका छौं ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्र बिगार्ने भनेको हामी राजनीतिज्ञहरु हौँ । हामीले हरेक क्षेत्रमाआफ्नो मान्छेलाई मात्र अगाडि बढाउने गरेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा मेरो मान्छे, मेरो कार्यकर्ता वा मेरो पार्टीको मान्छे होइन, त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो, सक्षम मान्छेलाई राख्नुपर्छ । उत्पादनगर्ने ठाउँमा मेरो मान्छे वा मेरो कार्यकर्ता खोज्न थाल्यौँ भने कहिल्यै सोचेजस्तो परिणाम पाउन सक्नेछैनौँ ।
हामीले उचाई हासिलगर्न नसक्नुको मुख्यकारण भनेको नै गन्तवयबिहीनभएर हो । यसैलाई ध्यानमा राखेर हेलम्बु गाउँपालिकाले, जुन बाटोमा हिड्नुपर्ने हो त्यहीगन्तव्य तयार पारेका छौ भन्ने दावीहाम्रो हो । अहिलेसम्महामी हिडिरहेको बाटो ठीक छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
कृषिमा कस्तो योजनालागू गर्नुभएको छ ?
कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य सहित एक घर एक तरकारी टनेल निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेका छौँ । यसो गर्दा आमकिसानको तरकारी उत्पादनगर्ने बानीपनि बस्छ । किसानहरुले रोजगार समेत पाउँछन् । उत्पादनगर्ने क्षमताहामीमा छ । हाम्रो भरिसक केही कुरा बाहिरबाट ल्याउननपरोस् र सकेसम्म उत्पादनहुने कुराहरु यहीउत्पादन गरौँ भन्ने चाहना छ । भैँसी पालनगर्न इच्छुक व्यक्तिलाई अनुदानदिने निर्णय गरेका छौँ । चौरी पालनगर्नेलाई चौरीगाईको बिमा र चौरी गोठमा सोलार बत्ति जडान गर्दिने कामनिरन्तर गरिरहेका छौँ । तर यसो गर्दा पनि धेरै व्यक्तिचौरी पालनप्रतिआर्कषित भएको देखिएको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिलाई यस क्षेत्रतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर हामीनिरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले विभिन्न नीतिनियमबनाएर शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ ।
मुख्यतःजनताले अपनत्व महसुस गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ । आर्थिक पारदर्शीता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीयतहमा जे जे विषयमा गुनासाहरु आएका छन् त्यसको संवोधनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । जनविश्वास त्यसरी नै प्राप्तहुन सक्छ । अहिले स्थानीयतहमा विश्वासको संकट देखिएको छ । जनतार जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु जरुरी छ । म त्यसमा सचेत छु ।